Master Kush mbeu | MyWeedSeeds.com
Master Kush mbanje mbeu (2005 na2006 Winner weMarijuana Cannabis Cup) ndiwo muchinjikwa weF1 pakati pemhando mbiri dzeHindu Kush. Indica inotungamira, nekubata kushoma kwesativa inofadza. Muchinjikwa unochengetedza mhando yepamusoro, gohwo rakanaka, uye kuravira kukuru. Master Kush chirimwa chipfupi chakanyanya kukodzera kukurirwa mudzimba. Kutenda kune yake indica genetics, anofara kuburitsa gohwo rakakura kana akakura achishandisa indoor system senge gungwa regirini (SOG) kana mune greenhouse. Iye chisarudzo chaanofarira chevarimi ve indica uye hunhu hwake hwakareruka hunomuita iye sarudzo yakasarudzika yevarimi vemukati yechero ruzivo rwechiitiko. Master Kush vanonhuwirira mweya nekunhuhwirira kwakasimba uye kwepasi, saka iwe uchamuwana iye achirova zvisingaite silky kumeso. Iyo yepamusoro ndeye yakasimba inoshamisa pese pese-buzz.